Manazava ny antony nihaonany tamin'i Trump | i Tim Cook Avy amin'ny mac aho
Manazava ny antony nihaonany tamin'i Trump i Tim Cook
Tamin'ny fanambarana anatiny avy amin'ny orinasa amerikana avaratra, Nanazava tamin'ny mpiasany i Tim Cook ny antony nihaonany farany tamin'ny filoha voafidy any Etazonia, ao anatin'ny fihaonana izay nataony tamin'ny CEOs lehibe an'ny orinasa teknolojia ao amin'ny firenena.
Mazava ho azy toe-javatra tsy mahazo aina ho an'ny filohan'ny orinasa Cupertino ankehitriny, taorian'ny fanafihana marobe voaray tamin'ny fampielezan-kevitra Trump, toy ny fangatahana ankivy ny vokatra Apple nataon'ny filoham-pirenena amerikana ankehitriny, vokatry ny fandavan'ny orinasa hamoha ny iPhone an'ny mpamono olona, ​​tamin'ny fangatahana mazava avy amin'ny FBI.
Mazava ho azy, ny fifandraisan'i Trump sy Apple dia tsy nanomboka fanombohana tamin'ny 2016. Na izany aza, indray mandeha dia nanondro fa ny fiadidiana ny firenena matanjaka indrindra eto an-tany dia eo am-pelatanan'i Trump farafaharatsiny 4 taona manaraka, hendry ho an'i Apple ny tsy hanadino ny fifandraisany amin'ny governemanta.
Farany, Nandeha tamin'io fivoriana io i Tim Cook, fa ny endrik'izy sy ireo CEO hafa an'ny orinasa lehibe misolo tena azy toa an'i Elon Musk (Tesla Motors) na Larry Page (Google / Abidia) hoy izy rehetra. Tava nandeha erak'izao tontolo izao ary misy meme marobe namboarina.
Ao amin'ilay taratasy, navoakan'ny TechCrunch, Cook dia nilaza tamin'ny mpiasany ny antony nahatongavan'izy ireo nanatrika ity fivoriana ity:
Inona no maha-zava-dehibe ny ifandraisan'ny Apple amin'ny governemanta?
Tena zava-dehibe. Ny governemanta dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahaizantsika manao izay ataontsika. Mety hisy fiatraikany amin'ny lafy tsarany sy amin'ny lafiny tsara izany. […] Sarotra ny mandray fanapahan-kevitra toy izao. Fantatsika anefa izany ny fomba hiatrehana ireo raharaha ireo dia ny fidinana amin'ny fasika. Na eto amin'ity firenena ity, na any Eropa, na any Chine, na any Amerika atsimo, dia tapa-kevitra isika. Ary manolo-tena isika rehefa manaiky ary rehefa tsy manaiky. Heveriko fa tena zava-dehibe izany satria tsy miova ny zavatra miantsoantso fotsiny. Miova ny fisehoan'ny zavatra izay fomba tsara indrindra. Ny fihaonana dia fifanakalozan-kevitra momba ny hevitra fotsiny. "
Raha tianao, Afaka mamaky ianao ny taratasy feno eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Manazava ny antony nihaonany tamin'i Trump i Tim Cook
Apple Maps dia nanitatra tanàna maro miaraka amin'ny fanohanan'ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka any UK
Total Video Converter Pro, atolotra mandritra ny fotoana voafetra